Labo dalmar oo 'la dilay' kadib markii gabi dheer laga tuurey - BBC News Somali
Labo dalmar oo 'la dilay' kadib markii gabi dheer laga tuurey
Lahaanshaha sawirka CHMIELEWSKI/HAGENBUSCH
Image caption Labada nin ee meydkooda la heley
Labo nin oo reer Yurub ah oo bushkuleeti ku marayay adduunka oo dhan ayaa la sheegay in dhimashadooda ay ahayd dil qorsheysan, islamarkaasna laga tuuray qar dheer sida uu shaaciyay nin baare ah oo kiiskooda loo xil saaray.
Labadan nin oo lagu kala magacaabo Holger Hagenbusch oo Jarmalka u dhashay iyo Krzysztof Chmielewski oo Poland u dhashay ayaa meydkooda laga heley buur hoosteed, balse saraakiisha dalka Mexico oo ahayd meesha uu falka ka dhacay ayaa sheegay in baaskiilka uu fariinka la goostay, islamarkaasna waxa dhacay uu ahaa shir ay uga dhaceen wadada oo ku tiilay buur gabigeed.
Hase yeeshee qoyska nimanka ayaanan ku qancin sharaxaadaas, waxayna codsadeen in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo waxa dhacay.
Xeer Illaaliyaha gobolka Chiapas, Arturo Pablo ayaa sheegay in aysan jirin caddeymo ku filan oo muujinaya in raggan la dilay.
Balse nin la dhashay mid ka mid ah ragga dhintay oo Mexico tagay ayaa warbaahinta Jarmalka u sheegay in astaamaha meydka ka muuqday ay muujinayaan in uu dil dhacay, iyaga cagaha mid ka mid ah meydadka ay ka go'nayd.
Baarayaasha ayaa aaminsan in la jir diley labada nin, waxaana la sheegay in markii nimanka la dilay kadib la isku dayay in la qariyo oo shil loo ekeeysiiyo, balse ay shaxda ka qaldantay, islamarkaasna ay isku qaldeen baaskiiladii ay kala wateen. Tusaale meydka ninka Poland u dhashay ayaa la saaray baaskiilkii ninka Jarmalka, waxaana loo ekeysiiyay sidii in uu dhil dhacay.
Ninka lagu magacaabo Krzysztof oo u dhashay Poland ayaa muddo 3 sano ah adduunka baaskiil ku marayay, wuxuuna maray illaa 51 dal oo adduunka ka mid ah, halka Holger oo u dhashay Jarmalka uu maray 34 dal oo adduunka ka mid ah.
Labadan nin ayaanan wada bilaabin safarka, jidkooda ayaa isku soo dhacay marka ay marayaan gobolka Chiapa.
Baarayaasha ayaa sheegay in allaabihii muhiimka ahaa ee ay wateen laga qaatay.
Gobolkan ayaa ka mid ah meelaha dilalka ugu badan ay ka dhacaan, sanadkii 2017-kii waxaana lagu dilay 25,000 qof.